TaiG inoburitsa beta 2.4.3 yekukwirisa iyo jailbreak maitiro. | IPhone nhau
TaiG inoburitsa beta 2.4.3 yekukwirisa iyo jailbreak maitiro.
TaiG nhasi yatanga itsva beta yechishandiso chako kune jailbreak iOS 8.1.2-8.4. Ino nguva pane chimwe chitsva chete: gadziridza maitiro ejeri. Kunyangwe zvingaite senge yekunyepedzera kugadzirisa, muchokwadi kune vashandisi vanoti ivo pakupedzisira vakakwanisa kupaza jeri chishandiso chavo, saka zvinogona kunakidza kuti, kunyangwe iri mubeta, vashandisi vasati vaiwana vanoshandisa iyi nyowani shanduro.
Isu tinorangarira kuti vhezheni yapfuura, TaiG Jailbreak 2.4.2 beta yatove yakagadziridza maitiro ejeri uye vanofungidzirwa kuti vakagadzirisa dambudziko rakatadzisa vamwe vashandisi kubva pakupaza jeri zvigadzirwa zvavo nekuti maitiro akamira pa30% kana 40%. Pamusoro pezvo, vhezheni 2.4.2 yaisanganisirawo Cydia 1.1.23, inova yazvino vhezheni kubva kuSaurik chitoro. Iyo yazvino vhezheni vhezheni, TaiG Jailbreak 2.4.1 zvakare yakadzivirira maitiro kubva mukumira pa60%.
Ichi chishandiso, kwete kusiyana, ichiri kungowanikwa chete kumakomputa ane Windows operating system. Zvinotaridza kuti TaiG haina kumanikidzwa nePP kuvhura chishandiso chayo cheOS X uye ichienderera ichiita chinhu chayo, ichiburitsa vhezheni mushure mevhezheni kuti chishandiso chayo chikwane, chimwe chinhu icho chisati chaitika. Pamwero uyu, TaiG jailbreak inosvika pane yekupedzisira vhezheni painenge yatsvaga vhezheni 2.9.99 uyezve, uye ipapo chete, ndipo pavanozotanga chishandiso chejerebreak maMacs edu.
Izvo zvakataura uye atove nemazuva akati wandei aburitswa PP Jailbreak yeMac, Ndinofunga isu tinogona kutotaura kuti yako jailbreak isarudzo yakanaka, nyaya dzehunhu parutivi. Hapana muongorori wezvekuchengetedza (senge i0n1c, semuenzaniso) akataura chero chinhu chakaipa nezve PP Jailbreak, saka isu tinofungidzira kuti hauna chero chakakomba chekuchengetedza. Uye zvakare, mumwe watinoshanda naye Luis Padilla akatoputsa chishandiso chePP uye anoti chinoshanda sedumwa. Regai TaiG itarise.
1 Dhawunirodha TaiG Jailbreak Chishandiso 2.4.3 Beta
2 Dzidziso kune jailbreak isina kuiswa kune iOS 8.1.2-8.4
Dhawunirodha TaiG Jailbreak Chishandiso 2.4.3 Beta
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » TaiG inoburitsa beta 2.4.3 yekukwirisa iyo jailbreak maitiro.
Amaury Urbina Coronado akadaro
Mazuva ese ivo vanotora beta kugadzirisa zvikanganiso, iwe hautomboziva zvekufunga
Pindura Amaury Urbina Coronado
Pane here musiyano pakati pekutyorwa kwejeri neTaig kana nePP? Ndinoreva kuti mhedzisiro yacho yakafanana zvisinei nekuti unozviita naani.
Ndiko kuti ndakamirira Taig kuti aiburitse yeMac asi ini ndinoona kuti inoenda kwechinguva.
Ini ndinofunga kuti havafanirwe "kutenda zvakashata" zviri pachena kuti kana chishandiso cheWindows chakwenenzverwa, ivo vachakurumidza kuburitsa iyo yeMac; zvakare vazhinji venyu muri kupa mbiri kune vamwe vasina kutendeseka nyaya senge pp; tanga wati kutenda kuna Taig jeri rakawanikwa. Vanoti kune "vapemhi netsvimbo"
9 Tweaks Ichavandudza yako Apple Music Ruzivo